ANAA KA HABOON MOURINHO! Geesi 50 jirsaday maanta oo dhulka la dhacay Jose isaga oo aman huwiyey Pep Guardiola! - Gool FM	twitter
ANAA KA HABOON MOURINHO! Geesi 50 jirsaday maanta oo dhulka la dhacay Jose isaga oo aman huwiyey Pep Guardiola!
(Manchester) 24 Maajo 2016. Eric Cantona waxa uu maanta u dabaal dagayey sanad guuradii ka soo waregtay dhalashadiisii 50-aad, wareysi qoto dheer oo uu uga hadlayey Manchester United ayuu siiyey The Guardian, waxa uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa United, Jose Mourinho iyo kubadda cagta casriga ah.
Kaddib markii shaqada laga eryey xalay Louis Van Gaal, halyeyga Premier League waxa uu ka hadlay magacaabida la sugayo ee Jose Mourinho waxa uuna qudhiisa isu sharaxay jagada.
Eric Cantona waxa uu ku adkeystay in taageereyaasha Manchester United aysan jecleysan doonin maqshada kubadd cagta uu Jose Mourinho keeni doono Old Trafford, badalkiisa waxa uu amaan huwiyey tababaraha Manchester City Pep Guardiola oo uu ku tilmaamay “Wiilka ruuxiiga ah ee Cruyff”.
“Waan jeclahay Jose Mourinho, laakiin marka la eego nooca kubadda cagta ee uu dheelo ma qabo in uu yahay Manchester United,” Cantona ayaa sidaas yiri. “Waan jeclahay shaqsiyadiisa, waan jeclahay muxubada uu ciyaarta u qabo, shactiradiisa. Waa xigmadiiste, boqolkiiba boqol [100%] ayuu ka dalbadaa ciyaaryahanadiisa. Dabcan wax wuu ku guuleystaa.
“Laakiin ma qabo in ay tahay naqshada kubadda cagta ee ay jamaahiirta Manchester United jecelyihiin, xitaa hadii ay wax ku guuleystaan. Wuu ku guuleysan karaa Manchester United. Laakiin miyey filayaan kubadda cagta ceynkaas ah, xitaa hadii ay badiyaan? Sidaas ma qabo.”
“Guardiola ayuu ahaa. Waa wiilka ruuxiga ah ee Johan Cruyff,”
“Waxaan jeclaan lahaa in aan Manchester United ku arko Guardiola. Waa kan kaliya ee badali kara Manchester. Waxa uu joogaa Manchester, laakiin meesha qaldan.”
“Wax badan ayaan qabtaa aad ayaana u faraxsanahay. Laakiin hadii ay iga dalbadaan in aan noqdo tababaraha Manchester United, waan noqonayaa. Maxaa yeelay Guardiola ayaa ku sugan Manchester City waxa ayna doonayaan qof wax ku guuleysta isaga kubad cajiib ah dheelaya? Waa aniga kaas.”
Mar la weydiiyey waxa uu sheegayo in ay dhab ka tahay, Cantona wuu dhoola cadeeyey waxa uuna yiri “Haa, waa iga dhab. Sidaas waxaa u leeyahay marka aad joogta baarka ama maqayada khamriga. Marka aad dhahdo waxba igama galin, gabdhaha oo dhan wey ku doonayaan. Malaha marka aad dhahdo shaqada waxba igama galin, wey idiin karaan. Hadii ay I weydiin lahaayeen, si aad u adag ayaan u shaqeyn lahaa, dabcan.”